ကျန်းမာရေး နဲ့ ဆေးပညာ မေးလိုတာရှိပါကဖြစ်တဲ့သူရဲ့ အသက်၊ ကျား-မ ပြောပါ။ ဖြစ်နေတဲ့ လက္ခဏာ ၁-၂-၃။ တခုတိုင်းက ဘယ်လောက် ကြာပြီ။ လိုအပ်ရင် ကျန်းမာရေးရာဇဝင်၊ ဓါတ်မှန်၊ (အာလ်ထွာဆောင်း)၊ အိမ်ထောင်၊ ကလေး ရှိ-မရှိ။ နေတဲ့တိုင်းပြည်။ "လူနာမည်၊ နေရပ်လိပ်စာ အတိအကျ ကိစ္စမရှိပါ။" ဆေးနာမည်ရေးရင် Trade name ကုမ္ပဏီကပေးတဲ့နာမည် သာမက Generic name ဆေးနာမည် ထည့်ရေးပါ။ ဖုန်းဆက်ပြီးမေးရင် Time zone မတူတာရော၊ အသံထွက် လွဲနိုင်တာရောကြောင့် အဆင်မပြေပါ။ Facebook ကနေ မေးတာလဲ ပြန်ရှာရတာမလွယ်လို့ အဆင်မပြေပါ။ drswe01@gmail.com ကို (အီးမေးလ်) ပို့ပါ။ ဆေးပညာစာတွေ ဖတ်လိုပါရင် မာတိကာ အောက်ဆုံးမှာ ရှိပါတယ်။- http://dts-medicaleducation.blogspot.in/ ဆေးပညာစာများ- http://dts-medicaleducation-adult.blogspot.in/ အသက် (၁၈) နှစ်ပြည့်မှဖတ်ပါ ဆေးပညာစာများ- http://yamuna-online-clinic.blogspot.in ယမုန်နာ ဆေးခန်း- http://my-sayawun-life.blogspot.in/ ဆရာဝန်ဘဝ အမှတ်ရတာတွေ - http://dts-political-page.blogspot.in/ နိုင်ငံရေး စာမျက်နှာ- http://yamunaclinic.org/ ယမုန်နာ ဆေးခန်း- http://facebook.com/tint.swe.dr Facebook Monday, June 28, 2010
Hello doctor: I can’t stand to laugh after reading your story, Varicose Veins. Please explain about deep venous thrombosis coz my friend who lives in မတ်တတ်ရွာ got trouble with that case. သူများ တိုင်းပြည်တွေကို ခဏခိုးထွက်ပြီးဖြစ်ဖြစ် ခဏခဏ ခိုးထွက်ပြီးဖြစ်ဖြစ်၊ ဟိုမှာ အခြေတကျ နေပြီးဖြစ်ဖြစ် အလုပ် လုပ်ကြရာမှာ ကိုယ့်အရပ်နဲ့ အတော်ကြီး မတူဘူး။ “စက်ရုပ်ဝါဒ” ခေါ်ရမလားဘဲ။ အလုပ်ချိန်မှာ ထိုင်စရာဆိုတာ ထားမပေးဘူး။ ရပ်ပြီးလုပ်ရတာ မဟုတ်ရင်၊ ပြေးလွှားလုပ်ကြရတယ်။ အောက်ပိုင်း မသန်ရင် ဟန်မကျဘူး။ ကြာတော့ အောက်ပိုင်းက အတွင်းပိုင်း ရောဂါတွေ ရလာတတ်တယ်။ အမျိုးမျိုးရှိတဲ့ သွေးကြောတွေက ကောင်းနေပါမှ အသက်ရှင်နိုင်တာမို့ “အသက်သွေးကြော” လို့ တင်စားခေါ်ကြတာ မှန်တယ်။ နှလုံးကနေ တကိုယ်လုံးကို လွှတ်ပေးရတဲ့ Artery သွေးလွှတ်ကြော ပိတ်တာကို အတော်များများ သိကြတယ်။ Stroke လို့ ခေါ်တယ် မဟုတ်လား။ ဆေးစာ သိသူတွေကတော့ Myocardial infarction လို့ ခေါ်ပါတယ်။ တကိုယ်လုံးကနေ နှလုံးဆီ ပြန်လာရတဲ့ Vein သွေးပြန်ကြောမှာ သွေးခဲပြီး၊ ပိတ်တာကလည်း ဆိုးတဲ့ရောဂါဘဲ။ လူတွေကို ကြိုက်တာ၊ မကြိုက်တာ ပြောရမဲ့ ပါးစပ်ကို ပိတ်ခိုင်းထာတာ အပါအဝင် ပိတ်တာ-ဆို့တာဟာ ရောဂါဘဲ။ ဒီစာမှာ သွေးပြန်ကြော ပိတ်တာ ရေးပါမယ်။ အတိအကျ ပြောရရင် ဟို အတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ သွေးပြန်ကြောတွေ ပိတ်တဲ့ရောဂါပါ။ အပေါ်ယံမှာရှိတဲ့ သွေးပြန်ကြောတွေမှာ ပိတ်နေတာကို Superficial thrombophlebitis ခေါ်တယ်။ အဆိုးကြီး မဟုတ်ပါ။ Thrombophilia ခေါ်တဲ့ မွေးရာပါ ရောဂါ ရှိသူများမှာ သွေးခဲတတ်တယ်။ အမျိုးထဲမှာ တယောက်မက ဖြစ်တတ်တယ်။ “လူမှန်-နေရာမှန်” ဆိုတဲ့ စကားလိုဘဲ လူ့သွေးက သူ့နေရာမှန်ဖြစ်တဲ့ သွေးကြောထဲမှာနေရင် မခဲဘူး။ အပြင်ထွက်ရရင် ခဲသွားတယ်။ အဲဒါ အလွန်ကောင်းတဲ့ အစီအမံ ဖြစ်တယ်။ ထိခိုက်မိလို့ သွေးထွက်ရင် ကိုယ့်ဖါသာ ကြက်ခြေနီလုပ်ပြီး၊ လက်နဲ့ ဖိထားပါ။ သွေးရဲ့ခဲတတ်တဲ့ သတ္တိကြောင့် သွေးတိတ်သွားတယ်။ မခဲရမဲ့နေရာ သွေးကြောထဲမှာ ခဲရင်တော့ ဒုက္ခရောက်ရတယ်။ အများဆုံး ဖြစ်တာကတော့ ခြေသလုံးနဲ့ ပေါင်က အတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ သွေးပြန်ကြောတွေမှာ ဖြစ်တယ်။ သွေးခဲက ကွဲထွက်ပြီး၊ ဟိုဟိုဒီဒီ ရောက်တတ်သေးတယ်။ အရေးပါတဲ့ နေရာဖြစ်တဲ့ အဆုပ်ကို သွားပိတ်တာဟာ ရောဂါဆိုး တခု ဖြစ်ပါတယ်။ Pulmonary embolism (PE) လို့ ခေါ်တယ်။ သေနိုင်တယ်။ ခွဲစိတ်ခံထားရသူတွေမှာလဲ ဖြစ်လာတတ်တာမို့ ဆရာဝန်တွေက လူနာကို ခွဲစိတ်ပြီးနောက်မှာ ဒါမျိုး ဖြစ်မလာအောင် လုပ်ပေးကြရတယ်။ နောက် အကြောင်းတရားတွေကတော့ သွေးပြန်ကြောမှာ ဒဏ်ရာရလို့၊ ရောင်လာလို့ နဲ့ ခံနိုင်ရည် ပြဿနာ တခုခုဖြစ်လို့ပါ။ သွေးလျှောက်တာ နှေးရင်လဲ ဖြစ်တတ်သေးတယ်။ သွေးက လိုတာထက်ပို ပြစ်နေရင်လည်း ဖြစ်ချင်တယ်။ နာတာရှည် လူမမာဖြစ်ရ၊ အိပ်ရာထဲ လှဲနေရ၊ ခရီးရှည် အကြာကြီး သွားရတဲ့အခါမှာလဲ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ကင်ဆာဆေး၊ (အီစထိုဂျင်) ပါတဲ့ ကိုယ်ဝန်တားဆေးတွေကလည်း ဖြစ်စေနိုင်တယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန်နဲ့ မွေးပြီး ၁-၂ လ အတွင်းမှာ သတိထားပါ။ အမျိုးသမီးများကို သွေးဆုံးချိန်မှာ ပေးရတတ်တဲ့ Estrogen ဟော်မုန်း ကလည်း ဒီရောဂါမျိုး ဖြစ်စေတတ်တယ်။ ရွှေဗမာတွေ သူများတိုင်းပြည်တွေမှာ အလုပ်လုပ်နေကြရတာ သန်းနဲ့ချီနေပေမဲ့ သိပ်မဖြစ်ပါလားလို့ စောဒက တက်နိုင်ပါတယ်။ အထဲက သွေးပြန်ကြောမှာ သွေးခဲလေးတွေ ရှိနေပေမဲ့ ဘာမှမခံစားရဘဲ နေတတ်တယ်။ တချို့တဝက် လောက်မှာသာ ရောဂါ လက္ခဏာပေါ်တယ်။ ဖြစ်တဲ့နေရာမှာ ရောင်လာ၊ ပူလာ၊ နာလာ၊ နီလာတယ်။ မနီဘဲ အရောင် ပြောင်းလာတာမျိုးလဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။ အကွေး-အဆန့် လုပ်ရင် ပိုနာတယ်။ ကြွက်တက်သလို ဖြစ်တယ်။ Pulmonary Embolism ဆိုတာ ဖြစ်ရင်တော့ အသက်ရှူရတာ ခက်လာ-နာလာတယ်။ ချောင်းဆိုးတဲ့အထဲ သွေးပါလာမယ်။ အသက်ရှူနှုန်းရော နှလုံးခုန်နှုန်းပါ မြန်လာတယ်။ အရေးပေါ် ဆေးရုံတက်ရလိမ့်မယ်။ ရောဂါရှိနေတာကို Doppler Ultrasound ရိုက်ပြီး သေခြာအောင်လုပ်ရတယ်။ A D-Dimer test, Venography, (MRI) နဲ့ (CT) scanning တွေကိုပါ လုပ်တယ်။ ဖြစ်လာရင် ကုတာကတော့ ခဲနေတဲ့သွေးခဲ ပိုကြီးမလာစေအောင်၊ သေးသေးလေးတွေ ကွဲထွက်ပြီး၊ တခြားနေရာတွေ မရောက်စေအောင် နဲ့ နောက်ထပ် မခဲစေအောင် လုပ်ပေးရတာပါ။ Anticoagulants ဆိုတဲ့ သွေးမခဲဆေး၊ သွေးကျဲဆေးတွေ ပေးတယ်။ Warfarin နဲ့ Heparin ဆေးတွေကို အသုံးများတယ်။ ကိုယ်ဝန် ရှိတုံးဖြစ်သူတွေကိုတော့ Heparin ကိုသာ သုံးတယ်။ ၃ လ ကနေ ၆ လအထိ ဆေးကုရတယ်။ ကိုယ်ဝန်နဲ့ ခွဲစိတ်ရာကနေ ဖြစ်သူတွေကိုတော့ ဒီလောက် ကြာစရာ မလိုဘူး။ ဒီဆေးတွေက သွေးယိုတာ ဖြစ်တတ်ပြန်လို့ သတိထား သုံးရတယ်။ Thrombin Inhibitors ဆိုတဲ့ ဆေးကတော့ သွေးမခဲအောင် တားဆေးပါ။ Thrombolytics ဆေးကိုတော့ သွေးခဲ မြန်မြန် ပျော်စေအောင် ပေးတယ်။ Thrombectomy ခဲနေတဲ့သွေးကို ခွဲထုတ်နိုင်တယ်။ ဆေးပေးဘို့ မသင့်ရင် ဒါမှမဟုတ် ဆေးပေးနေတာနဲ့ မလုံလောက်ရင် Vena Cava Filter ဆိုတဲ့ အစစ်ကို သုံးနိုင်တယ်။ Graduated Compression Stockings နဲ့ compression hose ဆိုတဲ့ ခြေအိတ်ဆန်းကို စွပ်ထားခိုင်းတယ်။ အကိုက်အခဲပျောက်-အဖျားကျ-အရောင်လျှော့ဆေး Aspirin က သွေးကိုကျဲစေလို့ ဒီရောဂါမျိုးမှာ အသုံးကျတယ်။ တခါဖြစ်ဘူးရင် ထပ်ဖြစ်တတ်လို့ ရောဂါရှိနေသူဟာ ဆေးမှန်မှန် စစ်နေရတယ်။ ဒီရောဂါ မဖြစ်အောင် အကြာကြီး မရပ်ရသလို၊ အ်ိပ်ရာထဲမှာလဲ ရက်အကြာကြီး လှဲမနေရဘူး။ အိပ်ရာက မထနိုင်သူများ ခြေထောက်တွေ လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ပေးရတယ်။ ဝလွန်းရင်လဲ ဒီရောဂါ ဖြစ်နိုင်တယ်။ တောင်ပေါ်အမြင့်မှာ နေရ၊ သွားရရင် သတိထားရတယ်။ အသက်ကြီးလာရင် မကောင်းတာတွေထဲမှာ ဒါလဲပါတယ်။ လူက ဖက်တီး၊ အသက်ကလည်း ကြီးရင် ခရီးမထွက်နဲ့။ တောင်ပေါ်သားများ နိုင်ငံခြား သွားနေချင်ရင် နှစ်ခါပြန် စဉ်းစားပါလေ။ လေယျာဉ်ပေါ်မှာ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားပေးဘို့ ဗီဒီယို နဲ့ ပြပေးတာက ဒါမျိုး မဖြစ်အောင်လို့ပါ။ ရေ-အရည် အများကြီး သောက်ပါ။ အရည်ထဲမှာ အရက်နဲ့ ကော်ဖီများတာ မပါဘူး။ အဝတ်အစားကို ကြပ်နေတာမျိုး မဝတ်ရဘူး။ တင်းကြပ်တဲ့ ဘာသာရေး အယူရှိတဲ့ တိုင်းပြည်က မိန်းကလေးများ သူများနိုင်ငံတွေသွားတော့ လေယျာဉ်ပေါ်ရောက်တာနဲ့ အဖုံးတွေ အကာတွေ ခွါချကြတာက ဒီရောဂါ မဖြစ်အောင်တော့ ဟုတ်ပုံမရဘူး။ ဒါပေမဲ့ လှချင်တာက ကျန်းမာရေးအရ (နော်မယ်) ပါဘဲ။ Aisle တလျှောက် လူးလာ ခေါက်တုံ လူလုံးပြသလို လုပ်တာက လေယာဉ်မယ်လေးတွေနဲ့လဲ အပြန်အလှန် ပြုံးပြနိုင်တာမို့ ကိုယ်ရောစိတ်ပါ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်စေပါတယ်။ Dr. တင့်ဆွေ